यसरी सुरु हुँदै छ तपाइको अनलाइन कक्षा । - SAJHA SEWA
१५ वैशाख, काठमाडौं । कोभिड-१९ (नोवल कोरोना भाइरस) महामारीविरुद्धको लकडाउन लम्बिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ ।
‘विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूसँग सम्वाद गर्दा आदरार्थी शब्दको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कसैलाई पनि अनादर गर्नुहुँदैन’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
कक्षामा सहभागी हुँदा शिक्षक र विद्यार्थीले अनिवार्य औपचारिक पोशाक लगाउनु पर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकले अनलाइन कक्षामा प्रयोग गरिएका सामग्री फेसबुकमा सार्वजनिक गर्न नपाइने भनिएको छ ।
पूर्णकालीन शिक्षकहरूले विश्वविद्यालयको विभाग, स्कुल वा आंगिक क्याम्पस बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाइने आचार संहिता खण्डमा उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा उल्लेख आचार संहिता पालना गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक वा कर्मचारीलाई विश्व विद्यालयको नियम अनुसार कारवाही गरिने भनिएको छ ।
अनलाइन सञ्चालनका लागि शिक्षकले जुम, गुगल क्लास र एमएस टीम मध्ये एउटा छनोट गर्नेछन् । कक्षा सञ्चालन (होस्ट) को जिम्मेवारी विषय शिक्षकले पाएका छन् ।
विद्यार्थी जानकारी सिट, अनलाइन कक्षा तालिका अगि्रम रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै विद्यार्थी र शिक्षकहरुको हाजिरी रेकर्ड समेत राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तोकिएका कर्मचारीले हाजिरी राख्ने र निकाय प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘पाँच पैसाको झिटी छैन, पचास रुपैयाँको फुटानी’
त्रिविकै कतिपय प्राध्यापकले भने पूर्वाधारको अभावले गर्दा निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार अनलाइन कक्षा सम्भव नभएको बताएका छन् ।
मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. डम्बर चेम्जोङ विश्वविद्यालयको अनलाइन लाईब्रेरी, जहाँसुकैबाट ब्राउज गर्न सकिने प्रणाली, विद्यार्थीका लागि नेट आइडी जस्ता व्यवस्था नगरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन् ।
९० प्रतिशत शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री नभएको चेम्जोङको भनाइ छ । अड्को पड्को तेलको धुप जस्तो कक्षाका लागि ५० वर्षे कार्यक्रमको जस्तो नियम बनाएको उनको टिप्पणी छ ।
‘यो त पाँच पैसाको झिटी छैन पचास रुपैयाँको फुटानी भनेको जस्तो भयो’ उनले टि्वट गरेका छन्, ‘अनलाइनका कक्षका लागि पूर्वाधार शुन्य छ, कक्षा अनुशासनको फेहरिस्त ? सक्दो कडिकडाउ गर, तिमीहरू प्राज्ञ होइन प्रहरी हौ ।’
← सरकारले ल्यायो कोरोना ट्रेसिङ एप
बालुवाटारमा ओली–नेपाल छलफलपछि कोटेश्वरमा दुवै टोलीबीच वार्ता →
April 23, 2020 May 8, 2020 sajhasewa 0